MAHAFALY ny mahita hoe mitombo haingana be ny isan’ny olona manaraka ny fivavahana marina, noho ny fanampian’i Jehovah. (Isaia 60:22) Mihamaro àry ny Efitrano Fanjakana ilaina. Efitrano 13 000 mahery eran-tany no mila aorina na havaozina.
Nanao fanovana ny Filan-kevi-pitantanana satria te hanafaingana ny asa fanorenana sady te hitsitsy vola. Vao haingana, ohatra, no noforonina tany amin’ny foibe ny Sampan-draharaha Misahana ny Fanorenana Eran-tany (SFE). Miasa mafy izy io mijery hoe aiza no laharam-pahamehana amin’ny asa fanorenana sy fanavaozana eran-tany, ary ahoana no hamitana azy ireny haingana. Any amin’ny sampan’i Afrika Atsimo, Aostralazia, Eoropa Afovoany, ary Etazonia no misy ny Sampan-draharaha Misahana ny Fanorenana ao Amin’ny Tany Maromaro (SFT). Izy ireny no mandrindra ny tetikasa ao amin’ny faritra iadidiany, ka izay hamitana Efitrano Fanjakana haingana nefa mitsitsy vola no tena imasoany. Mandamina fampiofanana ao amin’ireo sampana iadidiany koa ny SFT, mba hahaizan’ireo rahalahy mikojakoja ny tranon’ny fandaminana. Samy ahitana Sampan-draharaha Misahana ny Fanorenana eo An-toerana (SFA) isaky ny sampana. Izy io no mandrindra ny fanorenana sy fikojakojana Efitrano Fanjakana sy Efitrano Fivoriambe.
Nisy fivoriana natrehin’ny anti-panahy rehetra tany Etazonia, tamin’ny Janoary 2015. Narahina mivantana tamin’ny alalan’ny video izy io. Nohazavaina tao ny fandaharana vaovao momba ny fanaovana mari-trano, fanorenana, ary fikojakojana Efitrano Fanjakana. Izao no nianaran’izy ireo tamin’izany:
Fanorenana: Tokony hifanaraka amin’ny zava-misy eo an-toerana ny planina modely sy ny akora ampiasaina. Tokony hifanaraka amin’ny toro lalana omen’ny Komitin’ny Fampanontana ao amin’ny Filan-kevi-pitantanana koa izy ireny. Tsy mila fikojakojana be sady tsy mandany vola ireo efitrano amin’izay, nefa koa tsara tarehy sy mateza.
Fikojakojana: Hisy mpiasa an-tsitrapo hampiofanina amin’ny fikojakojana isaky ny fiangonana, amin’izay ny efitranontsika mateza.
Be dia be ny asa mila atao eo amin’ny fanorenana sy fikojakojana. Raha miara-mientana anefa ny vahoakan’Andriamanitra, dia ho vita haingana ny asa ary hiasa amin’ny fomba tsara kokoa ny fanomezana voaray.
Miray Hina ny Vavolombelon’i Jehovah Rehefa Manao Fanorenana
Samy hafa fiaviana sy kolontsaina ary fiteny ny vahoakan’i Jehovah, nefa miray hina rehefa manorina Efitrano Fanjakana sy trano hafa. Manome voninahitra an’i Jehovah izany.